जाडो मौसममा मानव शरीरमा लाग्न सक्ने रोगहरु
नोभेम्बर 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments जाडौ मौसम, रोग
जाडो मौसम सुरु भएको छ । जाडो मौसममा के कस्ता रोग लाग्न सक्छन् भन्ने जानकारी हुन आवश्यक छ । जाडोमा स्वास-प्रस्वासका समस्या लिएर आउने समूहमा प्रायः जेष्ठ नागरिक र बच्चाहरु बढी हुने गरेको पाइन्छ । त्यसको एउटा कारण चाहि उनीहरुको रोग संग लड्न सक्ने प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु हो ।
जाडो महिनामा प्राय: स्वास-प्रश्वास सम्वन्धी रोगहरु बढी देखिन्छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि चिसो मौसम अर्थात जाडो आफै रोग लाग्ने महिना होइन । बरु यो मौसम रोगहरु लगाउने जीवाणु तथा विषाणुहरु सक्रिय हुन अनुकुल हुन्छ । त्यसैले रोगहरु बढी देखिने हो ।
तर आजको लेखमा भने जाडो मौसममा हाम्रो शरीरमा देखिने समस्या र बिरामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं । चिसो मौसममा हुने सामान्य रुघाखोकीदेखि छातीमा देखिने गम्भीर किसिमको संक्रमणबारे समयमै ध्यान दिन सकेमा यसले गर्ने असरहरु कम गर्न सकिन्छ ।
आउनुस् चिसोले के कस्तो समस्या निम्ताउन सक्छ जानौं
१. चिसो मौसममा हुने छातीको संक्रमण
चिसो मौसममा हुने सामान्य रुघाखोकीदेखि छातीमा देखिने गम्भीर किसिमको संक्रमणबारे समयमै ध्यान दिन सकेमा यसले गर्ने असरहरु कम गर्न सकिन्छ।
चिसोमा प्रायः माथिल्लो श्वासप्रश्वासको संक्रमण र कानमा समस्या देखिन सक्छ । चिसो मौसममा आफूलाई सकेसम्म न्यानो राख्ने र सानो समस्यालाई पनि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार गराउन सके यी स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।
जाडो मौसममा जोर्नी दुख्ने; फुल्ने; सुन्निने समस्या प्रसस्त देखिन्छ । जोर्नी सम्बन्धी दीर्घरोग भएका बिरामीले जाडोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चिसो मौसममा न्यानो गरी बस्न नसके जोर्नीको दुखाइ बढ्ने गर्छ ।
चिसो मौसममा मानव शरीरका धमनीहरु खुम्चिने प्रक्रियामा हुन्छन्। त्यसो हुँदा रगतनली साघुँरो हुने, रगत प्रर्याप्त मात्रामा शरीरका अंगमा नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ।
५.चिसो मौसममा गर्मीमा भन्दा उच्च रक्तचाप, रक्तस्राव, हृदयघातका बिरामीको संख्या बढ्ने गर्छ । त्यसैले जाडो याममा बिहान हिँड्नु लाभदायक नहुन सक्छ ।
६. पिसाब अनि मिर्गौला सम्बन्धी समस्या
चिसोमा प्रायः मानिस कम पानी पिउने गर्छ्न् । कम पानी पिउने बानीले पिसाबमा संक्रमण हुने, पत्थरी हुने र मिर्गौला खराब हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले चिसो मौसममा पनि पानी पिउने बानी बसाल्नुपर्छ ।
७. छाला सम्बन्धी समस्या
चिसोमा छाला सुक्खा हुने, फुट्ने समस्या देखिन्छ । छालालाई नरम बनाइराख्न छालामा विभिन्न मोस्चराइजिङ क्रिम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
← नास्ट र डिन बीच ईन्जिनियरिङ्ग ज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि दुई पक्षीय सम्झौता
स्वास्थ्यको लागि फापर खानुका फाइदाहरू →
सेप्टेम्बर 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
सेप्टेम्बर 27, 2019 सेप्टेम्बर 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1